I-Poidełko → Amaphoyinti Amanzi • I-Elkay • Iziphuzo • Imithombo yamanzi okuphuza • Zdroje
I-Water Point njengommeleli kuphela U-Elkay ePoland kunikezwa ophuzayo, imithombo amanzi imithombo yokuphuza yasentwasahlobo neyokuphuza, eyenzelwe izikole namanyuvesi, izakhiwo zamahhovisi, izitolo ezinkulu zezitolo, izikhungo zokukhiqiza, amakilabhu wokuzilolonga, izikhungo zezemidlalo, izikhungo zezindiza, iziteshi, izikhungo zezempilo, amahholo wokuzijabulisa, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, amabhayisikobho
Landa ikhathalogu >>
Izinkampani zakwa-Elkay zidluliselwa phambili e-Downers Grove, e-Illinois, enezindawo zokukhiqiza e-United States, kanye nokusebenza kwamazwe omhlaba eChina naseMexico okuhlinzeka izimakethe zomhlaba wonke.
Musa ukuhlunga amanzi. Mhlanze! Sethula ubuchwepheshe bezibani ze-UV UV eziguqukayo zokukhipha amagciwane emanzini kusuka ku-Acuva. Singumsabalalisi wokuqala okukhethekile eYurophu!
Isiphuzo sezinhloso ezimbili - imodeli ye-LZS8WSS2K
Le modeli inhlanganisela yesiteshi sokugcwalisa ibhodlela lamanzi nesiphuzo sokucima ukoma ngokuqondile ngaphandle kokusebenzisa eminye imikhumbi. Kuyisixazululo esifanele sezikole, amanyuvesi, izikhungo zomphakathi, kubandakanya amakilabhu wokuzilolonga, amahhovisi kanye nezibhedlela.
Ngasikhathi sinye, wethula ifilosofi entsha yemvelo ngokwazisa abasebenzisi ngenani lamabhodlela epulasitiki agcinwe sibonga ngale ndlela yokusetshenziswa kwamanzi.
I-Green Tricker - Ibonisa inani lamabhodlela epulasitiki agciniwe.
Isiqondisi sokuhlunga imidwebo (amamodeli anokuhlunga kuphela) - Ama-LED aluhlaza, aphuzi, nabomvu akhombisa isimo sesihlungi.
Ukusakazwa kweLaminar - Umlomo wombhobho wokugcwalisa osuhlehlisiwe - uqinisekisa ukugeleza okushelelayo nokusabalalisa okuncane
Ukuphefumula okuguqukayo - I-Flexi-Guard ivikela ekulimaleni komsebenzisi. Inokumbozwa okuvikela ukukhula kwama-microorganisms.
Ukusebenza kwenzwa kagesi - Ukungathintwa nokusebenza kwenhlanzeko ngokucisha okuzenzakalelayo ngemuva kwemizuzwana engama-20 yokungasebenzi.
Amakilabhu wokuqina nokuningi
Imodeli LZS8WSS2K - le divayisi yenziwa ngezinto ezingama-60% ezenziwe kabusha, futhi ilungele ukusetshenziswa ngabantu abakhubazekile, izingane kanye nabantu abadala ezihlalweni zabakhubazekile.
Isibonisi esikhethekile esine-counter sazisa umsebenzisi ngenani lamabhodlela ezilwanyana ezigciniwe, ngaleyo ndlela ahambisane nesimo samanje semvelo.
Ifakwe isihlungi sekhwalithi ephezulu (ukuhola, i-chlorine, okuqukethwe kwe-solids kanye nokunambitheka okuthuthukile) enele amalitha amanzi ayi-12.000 nesiqandisi.
Uma isetshenziswa ezikhungweni zesikole, ingahlonywa nge-spout ekhethekile, esebenza kahle kakhulu, eguquguqukayo evikela izingane ekulimaleni. Idrayivu yokugcwalisa amabhodlela idalwa ngokuzenzakalela yinzwa.
* Kungenzeka ukwenza noma iyiphi i-logotype epuletini le-aluminium.
Isiphuzo - imodeli ye-EZS8S
Njengemodeli engenhla, ifakwe esiqandisini, isihlungi sekhwalithi ephezulu (ukuhola, i-chlorine, okuqukethwe kwe-solids nokunambitheka okungcono kanye nephunga) okwanele amalitha amanzi ayi-12.000.
Uma isetshenziswa ezikhungweni zesikole, ingahlonywa nge-spout ekhethekile, esebenza kahle kakhulu, eguquguqukayo evikela izingane ekulimaleni.
Ilungele ukusetshenziswa ngabantu abakhubazekile, izingane kanye nabantu abadala ezihlalweni zabakhubazekile.
Isiphuzo - setha i-LZSTL8WSS2K
Isethi enezimbambo ezimbili enamamodeli angeniswe ngaphezulu kwabadala nezingane.
Isisulu sokugcwalisa amabhodlela sidalwa ngokuzenzakalela ngenzwa.
Iziteshi ezigcwaliswe ngamabhodlela ezigcwaliswe ngodonga
• icushiwe yinkinobho
• Ikhawuntala ye-Green Tricker
• uhlelo lokukhipha kanye ne-profiling yalo kuqedwa
Amanzi asalayo asele kulokho okusetshenziswayo
• isetshenziselwa ukugcwalisa: amabhodlela amanzi, amabhodlela, izimbiza
• yenzelwe ukufakwa ezindaweni ezinzima
ukufinyelela amandla we-mains
• Isibonisi se-Green Tricker sinikezwe amandla amabhethri ama-3 AAA
• ilungele amahhovisi nezindawo zokusebenza
• Iqondwe inzwa engathinteki
• umthamo wokugcwalisa ophezulu we-4,5-6 l / min
• ukuvala okuzenzakalelayo ngemuva kwemizuzwana engama-20 yokungasebenzi
Isitsha sokuphuza esenziwe ngensimbi engenacala. Ukuma okhethekile kwesitsha kunciphisa ukugoqa. I-activator ejiyisayo evimbela ukusetshenziswa kanzima futhi ayidingi ukuqothuka noma ukusonteka. Ukulungisa ukuphakama kwe-jet ngokusebenzisa umgodi okhethekile enkingeni, ngaphandle kokuthi uhlukane.
Isitsha sokuphuza esenziwe ngensimbi engenacala. Ukwakheka okukhethekile kwesitsha kunciphisa ukugqagqana. I-activator ejiyisayo evimbela ukusetshenziswa kanzima futhi ayidingi ukuqothuka noma ukusonteka. Ukulungisa ukuphakama kwe-jet ngokusebenzisa umgodi okhethekile enkingeni, ngaphandle kokuthi uhlukane. Isiphuzo sifakwe iphaneli yedonga elivikelayo.
Iziphuzo - amamodeli amelana nokucekelwa phansi kwempahla
Uhlu lwamamodeli anesakhiwo esihlala isikhathi eside esenziwe ngensimbi engenasici esingu-2 mm. Ifakwe ngaphandle kwe-lead-free, i-spout eqinile kakhulu eyenziwe ngethusi le-chrome-plated.
Inkinga yokuvimbela ukungonakaliswa, ukuvala ngokwakho, okungenakho ukusebenzisa inketho yokuvula ukuphakama kwe-jet.
Ingamelana nomthwalo omile ongama-250 kg. Ukuvunyelwa kwabantu abakhubazekile. Iphelele izikole, izindawo zokuthenga, ukunakekelwa kanye nezikhungo zemfundo.
Isikhungo sokugcwalisa amanzi se-Vandal-proof sihlanganisiwe nebhodlela lamanzi. Kutholakala ngesihlungi nokuphola.
Ikhamera entsha ye-Green Tricker ikhombisa ukuthi mangaki amabhodlela epulasitiki angazange abe yimfucuza futhi evikela nemvelo.
Uhlu lwamamodeli anesakhiwo esihlala isikhathi eside esenziwe ngensimbi engenasici esingu-2 mm.
Ifakwe ngaphandle kwe-lead-free, i-spout eqinile kakhulu eyenziwe ngethusi le-chrome-plated. Inkinga yokumelana nokuzikhusela, yokuzivala, engenakho ukuzikhohlisa ngokuvulelwa kokulawula ubude be-jet.
I-Swirlflo® isiphuzo - ifomu lesimanje
Okuthuthuke kakhulu ngokulandela isiphuzo sefomu kusuka ochungechungeni lwe-SWIRFLO, olwenziwe ngensimbi ephezulu engenasici, enephaneli yedonga nenkinobho enkulu yokubuya kwentwasahlobo.
Ukuvunyelwa kwabantu abakhubazekile. Kunikezelwa ezikhungweni zezempilo, ezikhumulweni zezindiza, eziteshini nakwezinye izikhungo zomphakathi kanye namahhovisi.
Isiteshi sokugcwalisa amabhodlela amanzi esihlanganisiwe nesiphuzo sesimanje se-SWIRFLO esenziwe ngensimbi engenasisekelo, esinomhluzi, ngaphandle kokupholisa, ngephaneli yedonga nenkinobho enkulu yokubuya kwentwasahlobo.
Ikhamera entsha ye-Green Tricker ikhombisa ukuthi mangaki amabhodlela epulasitiki angazange abe yimfucuza futhi evikela nemvelo. Ukuvunyelwa kwabantu abakhubazekile.
Kunikezelwa ezikhungweni zezempilo, ezikhumulweni zezindiza, eziteshini nakwezinye izikhungo zomphakathi kanye namahhovisi.
Iziphuzo ezithambile ezinhlangothini ezithambile - ifomu lesimanje
Isethi ephindwe kabili yeziphuzo zezingane nabadala, eyenziwe ngensimbi engenasisekelo, enophiko lwodonga oluvikelayo olunokubukeka okuhle futhi nefomu lesimanje.
Ukuvunyelwa kwabantu abakhubazekile. Iphelele izikhungo zomphakathi, izikhungo zezindiza, iziteshi.
Isiphuzo esenziwe ngensimbi engenasisekelo esezingeni eliphakeme, sinefiltha kanye nesiphuzo esibandayo, esinephaneli yedonga elivikelayo ngokubukeka okuhle futhi nefomu lesimanje.
Ukunisela amabhodlela neziphethu zamanzi - ngaphandle
Izikhungo zokugcwalisa amabhodlela amanzi nabaphuza ngazo - ENDURA
Isiteshi samabhodlela wamanzi asongwe ngogange, i-vandal-proof, enesakhiwo esimi isikhathi eside, senziwe ngensimbi ebiyelwe ngabandayo, ingama-4,5 mm ubukhulu.
Ukuqeda amandla, ukumelana nesimo sezulu. Inkinobho yangaphambili okulula ukuyisebenzisa ene-valve yokuzivala.
I-Spout ene-flow inaphungula ama-splashes wamanzi anomthamo we-4,5-6 l / min. Iphelele ezindaweni zokuzijabulisa.
Kuqinisekisiwe kwabakhubazekile. Kuyatholakala ohlotsheni oluvimbela isithwathwa - i-valve iyakhokhwa ngokungeziwe.
Isiteshi samabhodlela samanzi esinesiphuzo nesitsha sezinja, i-vandal-proof, enesakhiwo esihlala isikhathi eside, esenziwe ngensimbi ebiyelwe, obukhulu obungu-4,5 mm.
Isiphuzo sangaphandle - ukuhlanganiswa kwemvelo
Isitsha sokuphuza esenziwe ngezinto ezihlanganisiwe zemvelo - ukhonkolo we-vibro. Ukumelana kakhulu nezimo zezulu. Ezinye izinto zenziwa ngensimbi engenasisekelo. Isikhunta esingavikeleki ekulimaleni. Yakhelwe abantu abakhubazekile. Kuyatholakala ohlotsheni oluvimbela isithwathwa - i-valve iyakhokhwa ngokungeziwe.
Isiphuzo esidlulayo esenziwe ngezinto ezihlanganisiwe zemvelo - ukhonkolo we-vibro. Ukumelana kakhulu nezimo zezulu. Ezinye izinto zenziwa ngensimbi engenasisekelo. Isikhunta esingavikeleki ekulimaleni. Kuyatholakala ohlotsheni oluvimbela isithwathwa - i-valve iyakhokhwa ngokungeziwe.
5 / 5 ( 42 amavoti )
amanzi ahlanzekileamanzi amahhalaimithomboimithombo yamanzi yokuphuzaiziphethu zedolobhai-pitnikpitnikiizimbiza zamanziabaphuzayoumsabalalisi ophuzayoiziphuzo ze-elkayabaphuza i-ironcoumkhiqizi ophuzayoiziphuzo zangaphakathiiziphuzo zangaphandleophuzayoisiphuzo sesikoleiqonde empompiniamanzi ezikoleamanzi ompompiukuphuza ama-spasentwasahloboumthombo wamanzi okuphuzaentwasahloboukuphuza umthombo wamanzi
Iziteshi zokubulala amagciwane